नेपालमा कोरोना खोप, यी हुन् तपाईले अनिवार्य जान्नैपर्ने १० कुरा — Imandarmedia.com
नेपालमा कोरोना खोप, यी हुन् तपाईले अनिवार्य जान्नैपर्ने १० कुरा
काठमाडौं । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण नेपाल यतिबेला विश्वकै उच्च संक्रमण दर भएको मुलुकमा दरिन पुगेको छ । मुलुक पूर्ण लकडाउनमा गएको एक महिनापछि तीन दिनयता मात्र दैनिक संक्रमितको संख्याभन्दा निको हुने संख्या धेरै देखिन थालेको छ । १०० माथिको मृत्यु र ८ हजारमाथिको संक्रमण संख्या गत एक महिनायताको नियति बन्न पुगेको छ ।
कोरोनविरुद्धको लडाइँमा मुख्य हतियार मानिएको खोपमा नेपालले किन प्रगति गर्न सकेन, खोपमा नेपालको अहिलेको अवस्था के हो ? खोप खरिदका लागि नेपालले केके गरिरहेको छ ? यी सबै कुराको नालीबेलीको समाचार अनलाइनखबरबाट साभार गरिएको हो ।
नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि कोरोना खोप आएको छ, त्यो मध्ये १० लाख नेपालले भारतबाट किनेको हो भने अरु सबै अनुदान हो । सबैभन्दा पहिले भारतले नेपाललाई माघ ८ मा १० लाख खोप अनुदानमा दियो । त्यसपछि नेपालले भारतको खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटसँग २० लाख खोप खरिदका लागि सम्झौता गर्यो र त्यसको अग्रिम भुक्तानी समेत गर्यो ।
२० लाख मध्ये सेरमले १० लाख खोप समयमा नै दियो । तर, भारतमा कोराना प्रकोप बढेपछि सेरमले दिनुपर्ने बाँकी १० लाख खोप दिएको छैन । अहिले पनि सो खोप खरिदका लागि नेपालले ताकेता गरिरहेको छ । भारतले १ लाख खोप नेपाली सेनाका लागि छुट्टै अनुदान दियो । यस बीचमा चीनले नेपाललाई ८ लाख खोप अनुदानमा दियो । शुरुमा तीन लाख घोषणा गरेको चीनले त्यसलाई बढाउँदै पछि ८ लाख पुर्याएको थियो । त्यसैगरी नेपालले कोभ्याक्स अन्तर्गत ३ लाख ४८ हजार खोप प्राप्त गरेको छ ।
नेपाललाई मूल्य, तापक्रम र ढुवानीका हिसाबले सबैभन्दा सहज हुने भारतको सेरम इन्स्टिच्युटको कोभिशिल्ड नै हो । नेपालले कोभिशिल्ड खोप प्रतिडोज चार डलरमा खरिद गरेको थियो । यो निकै सस्तो हो । अब चीन र अमेरिकासँग नेपालले गरेको खोपको मूल्य कति पर्छ यकिन छैन । हालै बंगलादेशले चीनसँग प्रतिडोज १० डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
भारतले रुसी खोपलाई पनि औसत १० डलरकै हाराहारीमा खरिद गरेको छ । पश्चिमा मुलुकहरुले चलाएका फाइजर, मोडना र जोन्सनका खोप प्रतिडोज २० डलरमाथि माथि मूल्य परेको बिभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
अहिलेसम्मको सरकारको योजना ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई भ्याक्सिन लगाउने हो । त्यसका लागि ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले एक डोज खोपलाई औसतमा १० डलर लाग्ने अनुमान गरेको छ । भ्याक्सिन खरिदका लागि सरकारले सरकारकै स्रोत प्रयोग गर्ने र बाँकी राष्ट्रसंघीय निकाय र वैदेशिक संस्थाहरुसँग सहायता लिने योजनामा छ । नेपालले १८ वर्ष मुनिकालाई खोप नलगाउने योजना बनाएको भए पनि दोस्रो लहरमा युवा र तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित देखिएको हुँदा सो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।